Militariga oo ku hanjabay in la soo xiri doono General Xuud | Dhacdo
Home Wararka Maanta Militariga oo ku hanjabay in la soo xiri doono General Xuud
Militariga oo ku hanjabay in la soo xiri doono General Xuud
General Saalax Yacquub, Abaanbuulaha Qaybta 27aad ee Ciidanka Xoogga Dalka ayaa maanta ku hanjabay in la soo xiri doono General Abuukar Xaaji Warsame (Xuud), oo horey uga tirsanaa Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka.
Jabhad uu hoggaamiyo General Xuud oo lagu magacaabo HLF (Hiran Liberation Front) ayaa saakay weerartay Magaalada Beledweyne.
General Saalax Yacquub oo Warbaahinta kula hadlay Magaalada Beledweyne ayaa yiri “Maalmahaanba waxaa jiray nin la yiraahdo Abuukar Xuud oo janan Soomaaliyeed sheeganayo, isagoo leh waxaan la dagaalamaa oo aan ka soo horjeedaa Dowlad Goboleedka Hirshabelle ayaa saakay 5-tii subaxnimo magaalada gudaheedaa waxaan ka war helnay dabajeex, qoryaha AK47 iyo sabano magaalada gudaheeda ka dhacaya. Ciidamada Qalabka Sida dhammaan way iska diyaarsanaayeen, mar alla markaan meesha ku dhaqaaqayna waa cararay, haddana waa lagu daba jooggaa oo buuraha ayuu galay. Haddii Ilaahay idmo waala soo qaban doonnaa, uma maleynayo inuu sinna ku badbaadayo.”
Waxa kaloo uu sheegay inaanu General Xuud waxba kaga duwanayn Shabaabka hubeysan ee dalka ka dagaalama, isla-markaana ay isku mowqif yihiin.
“Maanta wuxuu Shabaab kaga duwan yahay maleh ninkaas. Shabaabka nabadiidka iyo isaga waa isku mowqif, waayo haddaad wax diidan tahay, laakiin shacabkiiyaa sabano la dhacaa, maxay ku kala duwan yihiin isaga iyo Al Shabaab? Waxba kuma kala duwano.” Ayuu yiri General Saalax Yacquub.
General Saalax Yacquub ayaa cadeeyay inaanan wax dhibaato ahi loo gaysan doonin General Xuud, marka gacanta lagu soo dhigo, balse ay sharciga horgayn doonaan.
“Haddii gacanta lagu dhigo sharcigaa la horgaynaa, wax kaloo loo gaysanayo ma jirto, meeshaan nidaam iyo sharciyaa jira, nidaam dowladnimaa jira. Iska dhaaf asagee laba dowladood oo ajnabi kala ahoo dagaalameysaa maxaabiistiiyoo la soo qabtayaa aanba la dilin. Sharcigaa la horgaynaa, sharciga wuxuu ka helo ayuu leeyahay.” Ayuu yiri Saalax Yacquub.
Afhayeen u hadlay General Xuud ayaa sheegay in ujeedkoodu uu ahaa in xabsiga magaalada ay ka sii daayaan dhalinyaro taageersan, balse ay xirtay Dowladda Federaalka.
General Xuud ayaa ka horyimid hannaankii loo maray doorashadii 11-kii bishii November ee sanadkii 2020 ka dhacday Magaalada Jowhar, laguna soo doortay Madaxweynaha cusub ee Hirshabelle, Cali Cabdullaahi Xuseen (Cali Guudlaawe).
Previous articleWeerar dad lagu dilay oo ka dhacay Shabellaha Hoose
Next articleUrurada Bulshada oo war ka soo saaray shirka Dhuusamareeb